अवसर गुमाउँदा किन टाउकोमा हात राख्छन् फुटबलर ? | | Neplays.com
अवसर गुमाउँदा किन टाउकोमा हात राख्छन् फुटबलर ?
By Neplays	 Last updated Jul 15, 2018
फुटबल खेलमा गोल गर्नेको खुसी त रमाइलो नै हुन्छ । अवसर नपाउँदा गोल गर्न चुक्नेको भावभंगी ठीक विपरीत हुन्छ । जब गोल गर्न सक्दैन त धेरैले एकै प्रकारको हाउभाउ देखाउँछन्, त्यो हो हात उठाउँदै टाउकोमा राख्ने ।
यसपालिको विश्वकपमा पनि यस्ता दृश्य धैरै देखिए । बारम्बार अवसरमा हरेक देशबाट खेल्ने खेलाडीले यस्तो संकेत गरे । अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनेल मेसीदेखि पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोसम्म । फाइनल पुगेका फ्रान्स र क्रोएसिया नै किन नहोस्, ती टोलीका खेलाडीले पनि अवसर चुकाउँदा यस्तै प्रतिक्रिया दिन भ्याए । जीवविज्ञ र मनोविज्ञहरूका अनुसार यस्तो ‘पोज’ दिनुमा फुटबलसँग कुनै सम्बन्ध नभएर मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ ।
ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी मनोवैज्ञानिक प्राध्यापक जेसिका ट्रेसीका अनुसार यो प्रतिक्रियाले ‘मैले गल्ती गरेको छु’ भन्ने संकेत दिन्छ । उनका अनुसार यस स्थितिमा छँदा अन्य मानिसले ‘मैले गल्ती स्वीकारें र मलाई माफी देऊ । मलाई यो गल्तीका कारण दोषी नठहर्‍याउ’ भन्ने बुझ्छन् ।
यस्तो प्रतिक्रिया दिनेमा प्रहार गर्ने खेलाडी स्वयं मात्र संलग्न छैनन् । अहिलेसम्म नै विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको गल्तीमा सन् २०१० मा नाइजेरियाका याकुबु आइएगबेनीको गल्ती हेर्नुपर्छ । याकुबुले पोस्टभन्दा १० फिटपरबाट खाली पोस्टमा गरेको प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेन । उक्त प्रहारपछि याकुबु डेग चलेनन् तर उनका एक सहकर्मी र प्रशिक्षकले भने एकै समयमा उक्त संकेत प्रदर्शन गरे ।
सन् १९८१ मा जीवविज्ञ डेसमन्ड मोरिसले गरेको ‘द सकर ट्राइब’ नामक अध्ययनले १२ खेलाडीले देखाएको प्रतिक्रियाको विश्लेषण सामेल थियो । उनले त्यतिबेला यो प्रतिक्रिया आफूलाई आराम दिन गरिने बताएका थिए । उनका अनुसार कुनै गल्ती गरेपछि कसैले ठीक छ भन्ने विश्वास दिलाउन सहयोग गर्दियोस् भन्ने चाहना हुन्छ तर ठीक त्यहाँ अन्य कोही उपलब्ध नहुँदा आफैंले आफैंलाई टाउको हात राखेर चित्त बुझाउने गरेका हुन्छन् । मानवबाहेकका केही पशुमा पनि यो देखिन्छ ।
सन् २००८ मा ट्रेसीले आफ्नो समकक्षी डेविड माट्सुमोटोसँग मिलेर फरक अध्ययन गरिन् । त्यसबेला पारालिम्पिकमा जन्मजात दृष्टिविहिन खेलाडीमा गरेको अध्ययनले पनि यस्तो प्रतिक्रिया विश्वव्यापी र प्राकृतिक रुपमा बाहिर आउने बताए । ‘यदि हात टाउकोमा छ भने त्यो लाज हो,’ ट्रेसीले भनिन्, ‘शरीरको हलचल र खेलाडीको हातको स्थिति हेर्दा खेलाडीले आफूलाई सानो देखाउन खोजेको भान हुन्छ । यो नै लाज देखाउने प्रचलित हाउभाउ हो ।’
खेलाडीले गल्ती गरेको स्वयं खेलाडीबाहेक अरुले राम्ररी बुझ्न सक्दैनन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेर हाल टेलिभिजन विश्लेषकको भूमिकामा देखिएका कोबी जोन्सका अनुसार खेलाडीले गल्ती गर्दा अपत्यारिलो र निकै लज्जास्पद भावना हुन्छ । ‘हामीले हरेक दिन र हरेक समय प्रशिक्षण गर्ने भनेकै बललाई गोलपोस्ट भित्र छिराउन हो,’ उनले भने, ‘अवसर जतिबेला पनि सामान्य हुन्छ । गल्ती गर्ने भन्ने विकल्प नै हुन्न ।’
यो संकेत विपक्षी गोलरक्षकले पक्काजस्तो देखिएको गोललाई उत्कृष्ट ढंगले बचाउँदा पनि देख्न सकिन्छ । यसको राम्रो उदाहरण सन् २००६ को विश्वकप फाइनलको अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा देखियो । फ्रान्सका जिनेदिन जिदानको हेडर गोलपोस्टतर्फ जाँदा इटालीका जियानलुइजी बुफोनले औंलाको छेउले बललाई क्रसबार कटाइदिए । उक्त गोल भएको भए फ्रान्सको जित पक्का थियो । त्यसको नतिजास्वरुप जिदानले आफ्नो कपाल नभएको टाउकोमा हातले समाते ।
बल प्रहार गर्नेको गल्तीले होस् या गोलरक्षकले गरेको उत्कृष्ट बचाउ, असफल खेलाडीको प्रतिक्रिया त्यही नै हुन्छ । ‘तथ्यांक हेर्दा पनि सत्य त्यही देखिन्छ,’ बेलायती फुटबलका इतिहासकार डेविड गोल्डब्लाटले भनेका छन्, ‘खेलाडीले अवसर गुमाउँदा होस् या गोलरक्षकले विफल तुल्याउँदा होस् । जुन प्रक्रियाले तपाई त्यो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ, त्यो यहाँ न त्यहाँको हुन्छ । ’
समर्थकबारे भने फर्लीले खेलाडीको व्यवहार र हाउभाउले उनीहरूलाई असर पर्ने हुनाले यस्तो प्रतिक्रियाले समर्थकले पनि खेलाडीको अवस्था बुझ्ने निष्कर्ष निकाले । कारण जे भए पनि यो प्रतिक्रियाको सम्भावना एकदम प्रबल रहन्छ । ‘यो कमेडियनले कुनै प्रहसनमा जोक भनेजस्तै हो,’ उनले थपे, ‘मानिसहरू चुटकला पूरा नहुँदै हाँस्न थाल्छन् । धेरै कमेडी यसरी नै चलेका हुन्छन् ।’
न्युयोर्क टाइम्समा डेविड गेन्डेलम्यानको लेखबाट अनुबादित
नाइट पार्टीमा जाने खेलाडीलाई साग खेल्न दिदैनौं– एन्फा अध्यक्ष
पाेखरामा हुने भनिएकाे महिला फुटबल काठमाडाैंमा सर्ने संभावना
आर्मीलाई हराउदै बीबीसी चन्द्रागिरी गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
नेपाली फुटबल टोली काठमाडौं फर्कियो
‘मैले चाहेको भए म मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा माथिल्लो स्तरमा हुन्थे’–वेस्ले
रियल मड्रिडको खेलमा रेफ्री परिवर्तन हुने